လွိုင်ကော်မြို့ကို ရောက်ခဲ့တယ် – ၁ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Travel » လွိုင်ကော်မြို့ကို ရောက်ခဲ့တယ် – ၁
လွိုင်ကော်မြို့ကို ရောက်ခဲ့တယ် – ၁
Posted by မောင်ဆန်း on Jan 22, 2014 in Travel | 23 comments
ကယားပြည်နယ်နေ့ ကြုံချင်တာနဲ့ လွိုင်ကော်ကို ၁၂ ကနေ ၁၆ ထိ သွားဖြစ်လိုက်တယ်၊ ၁၉၉၇ လောက်က တစ်ခေါက် ရောက်ဘူးပေမဲ့ တစ်ညအိပ် ခရီးမို့ ဘယ်မှ မရောက်ဖြစ်လိုက်ဘူး ၊ အခုတစ်ခေါက်တော့ အချိန်ရတာမို့ သွားဖြစ်တာတွေထဲက သိချင်မယ် ထင်တာလေးတွေ ရွာသူားတွေ အတွက် တင်ပေးလိုက်ပါတယ်..
လွိုင်ကော်ကို လေယာဉ် နဲ့ ရော ကားလမ်းကပါ သွားလို့ ရပါတယ်၊လေယာဉ်က လောလောဆယ် မြန်မာ့လေကြောင်း တစ်ခုပဲ ရှိသေးတယ် တစ်ပါတ် (၄) ရက် (လာ၊ဟူး၊ကြာ၊သော)ရှိတယ် ၊ မြန်မာ့လေကြောင်းမို့ အချိန်အပြောင်းအလဲလေးတွေတော့ ရှိတတ်တယ် နောက်နှစ်လလောက်ဆိုရင်တော့ ပုံမှန် လမ်းကြောင်းနဲ့ လေကြောင်းလိုင်းအသစ်တွေ ရှိလာနိုင်ပါတယ်။ ကားလမ်းကတော့ အောင်ပန်း ပင်းတယ ဘက်က သွားလို့ရမယ် ၊ တောင်ငူလိပ်သို ဘက်ကတော့ လမ်းကြောင်းရှိတယ် လမ်းမကောင်းတာရယ် နယ်မြေအခြေအနေတွေကြောင့် လမ်းပိုတိုပေမဲ့ ဘယ်သူမှ အသုံးမပြုကြဘူး၊ ကိုယ်ပိုင်ကားနဲ့ သွားလို့ ရသလို ရန်ကုန် မန်းလေး ဘက်တွေကိုလဲ လိုင်းကားဂိတ်တွေ ရှိပါတယ်။
ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အထက် ၂၉၅၀ ပေ မှာ ရှိတာမို့ နေလို့ကောင်းတဲ့ မြို့လေးပါ၊ဒီဇင်ဘာထဲ သွားသူတွေ ကို မေးကြည့်တော့ သိပ်မအေးသေးဘူး ဆိုပေမဲ့ ကျနော်ရောက်တဲ့ ရက်ကတော့ တော်တော်လေးကို အေးပါတယ် ညနေစောင်းတာနဲ့ အနွေးထည် မ၀တ်ပဲ မနေနိုင် ခေါင်းစွတ် မစွတ်ပဲ အပြင် မထွက်နိုင်ပါဘူး ၊ အဲဒီရက် အပူချိန် ၈ ဒီဂရီ ရှိပါတယ် ၊ သူတို့ အဆိုအတိုင်း ကယားပြည်နယ်နေ့ကတော့ အအေးဆုံးပါပဲ။
၁၅-၁-၂၀၁၄ က (၆၂)နှစ်မြောက် ကယားပြည်နယ်နေ့ပါ၊မြန်မာပြည် တစ်ခုလုံး အင်္ဂလိပ်လက်အောက် ကျရောက်ခဲ့ပေမဲ့ ကယားပြည်နယ်ကတော့ အင်္ဂလိပ်အောက် မရောက်ခဲ့ပါဘူး ပြည်နယ်ကို နယ်မြေအလိုက် သက်ဆိုင်ရာ စော်ဘွားတွေကသာ အုပ်ချုပ်ခဲ့ကြတာပါ ၊ အင်္ဂလိပ်တွေ မော်ချီးမိုင်းလုပ်တော့ ဘော်လခဲ စော်ဘွားကို အခွန်ပေးခဲ့ကြတယ် ၊ လွတ်လပ်ရေးရပြီး နောက်ပိုင်း တိုင်းနဲ့ ပြည်နယ်တွေ သတ်မှတ်ဘို့ လုပ်တော့ ကရင်နီ နဲ့ ကရင် တမျိုးထဲပဲ နယ်မြေတစ်ခု ထဲ သတ်မှတ်ပေးပါ ဆိုတာမျိုး တောင်းဆိုတာကို ကရင်နီ ဆိုတာ တခြားသူတွေက သူတို့ကို ခေါ်တဲ့ အမည် ကရင်နဲ့ ရုပ်ရည် စကားလဲ မတူ သီးခြားစီ ဖြစ်တာမို့ ကယားပြည်နယ်အဖြစ်သာ သတ်မှတ်ပေးဘို့ တောင်းဆိုတာကို ၁၉၅၂ ဇန် ၁၅ မှာ ရခဲ့တာမို့ ကယားပြည်နယ်နေ့ ဖြစ်လာတာပါတဲ့။
ကယော တို့ ကယား တို့
မြန်မာပြည်က ပဒေါင် (ညာဘက် အစွန်ဆုံး သမီးလေးက ၁၃ နှစ် ၈ တန်း တက်နေတယ်)
ရိုးရှင်း ပြီး ဆန်းပြားမှု ကင်းလွန်းပေမဲ့ ရိုးသားတဲ့ တိုင်းရင်းသူများရဲ့ သဘာဝကျကျ အပြုံး
ကယားပြည်နယ်နေ့ ကို ၁၀ ရက်လောက် လုပ်ပါတယ် တကယ်စည်တာက ၁၄-၁၇ ပါ ၊ ပြခန်းတွေ ရှိတယ် ၊ ဆိုင်ခန်း ၁၀၀၀ ကျော်ဖွင့်တယ် လူကတော့ ကြိတ်ကြိတ်တိုးပဲ ပြည်နယ်မှာ လုပ်ပေမဲ့ လောင်းကစားဝိုင်းတွေ မပါတာက အံသြစရာ ၊ ဓါးပြလှေ စီးတာမှာလဲ အပြည့် မတ်တပ်ရပ်စီးတဲ့သူ ၊က ပြီး စီးတဲ့သူနဲ့ ဘာ ဘေးကင်းရေး အစီအမံ မှ မရှိတာတော့ စီးတဲ့သူတွေ မသိပေမဲ့ ကြည့်ရတာတော့ ကြောက်စရာပဲ ၊ ခေါင်ရည် ဆိုင်တွေကတော့ အစွန်တန်းတွေမှာ ထားတယ် ဒီ မှာလဲ လူ ဘယ်နဲမလဲ ၊ စတိတ်ရှိုး နှစ်ရက် ရှိတယ် ၀ိုင်းစု တို့ ဘန်နီဖြိုးတို့လာတယ် ဘောလုံးကွင်း အပြည့် ၊ စင်ပေါ်က ကြိုက်တဲ့ သီချင်းဆို အားလုံးကို လိုက်ဆိုနိုင်တယ် တခြားမြို့တွေကပါ ညအိပ်လာကြတာပဲ ရင်ခွင်ပိုက်ကလေးနဲ့တောင် လာ အားပေးတယ် ရာသီဥတုက အေး ၊ စင်ပေါ်က သီချင်းကမြူး တကွင်းလုံးက မ်ိန်းကလေးငယ်ပါ မကျန် မူးနေ ခုန်နေ ပျှော်နေပေမဲ့ ရန်ဖြစ်တာ စကားများတာ မတွေ့ရတာတော့ ပို လို့ အံသြဘို့ကောင်းတယ် လုံခြုံရေးယူထားတာက ငြိမ်းချမ်းရေး အဖွဲ့တွေ၊ ၁၆ နဲ့ ၁ရ မှာ5Star အဖွဲ့ လာမယ် အဲဒီကျရင် ကြိုက်ကြလို့ရော အခမဲ့ပါမို့ ကွင်းတောင်ရှံသွားမယ်တဲ့ ။
အေးလွန်းတော့ နွေးတာလေးတွေ ရောင်းကောင်းတယ်
ဒီ လို တတ်တူး ဆိုင် ၂၀ ကျော်တယ် ဘာ တစ်ခါသုံး မှ မရှိ
ဒီ လို အမှန်အကန် အားပေးတယ်
ဒေသ အစားအသောက်တွေထဲက စ စားဖူးကတဲက ကြိုက်တာ ကယားဝက်အူချောင်းနဲ့ ခေါင်ရည်ပါ ၊ ခေါင်ရည် ဆို မှန်မှန်လေး နဲ့ ယဉ်ယဉ်လေး တက်လာတဲ့ အရသာလေးက ဆွဲမက်စရာပါ၊ ၀က်အူချောင်းက စားနေကြ အရသာမျိုး မဟုတ်ပဲ လုံးဝ မအီ ငရုတ်သီးစပ်စပ် အရသာလေးနဲ့ပါ ၊ နောက် ခေါင်ရည်ဆိုင်တွေမှာ သောက်ခဲ့ရတဲ့ ဆန်ပြုတ်ရဲ့ အရသာကလဲ တရုတ်တန်းက ဆန်ပြုတ်တွေထက် မညံ့ကြောင်း အာမခံနိုင်ပါတယ်၊ ထူးထူးဆန်းဆန်းကတော့ ဘီလူးချောင်းကရတဲ့ ခရုကို ပြုတ်ထားတဲ့ ဟင်းပါ အထဲက အသားလေးကို စုတ်စုတ်စားရတာလေးကလဲ အတွေ့အကြုံသစ်တစ်မျိုးပဲ ၊ အဲ လွိုင်ကော် ကို ရောက်သွားရင် ကယား ဟင်းထုတ်စားဘို့ မေ့လို့တော့ မရပါဘူး သပ်သပ်လွတ်ရော အသားပါ ရပါတယ် ၊ အခုထိတောင် ဟင်းထုပ် အရသာလေးရော ကယားမလေးရဲ့ မျက်နှာဝင်းဝင်းလေးရော သတိရနေတုန်းပါ ၊ တို့ဟူး နဲ့ ပတ်သက်ရင်တော့ ဒေါ်ရှမ်း ဆိုင်ကို အကြိုက်ဆုံးပဲ မနက်ပိုင်း တို့ဟူးနွေး ညနေ ပိုင်း တို့ဟူးသုတ်လေး မဖြစ်မနေ သွားစားကြည့်ဘို့ကောင်းတဲ့ နေရာပါ ၊ ငါးထမင်းနယ်၊၀က်/အမဲသချဉ် ၊ အင်းမုန့်ဟင်းခါးလေးလဲ မြည်းစမ်းခွင့် ရခဲ့တာ ကြိုက်တာပါပဲ ၊ ခြုံပြောရရင်တော့ စားခဲ့ သမျှ အားလုံး ကို ကြိုက်ပါတယ် ၊ရန်ကုန်မှာ အိမ်စာ ကလွဲလို့ အပြင်စာ စား မိရင် အခန့် မသင့် ဗိုက်ပြသနာ ရှိပါတယ် ၊လွိုင်ကော်မှာတော့ ပွဲဈေးရော လမ်းဘေးရော ဆိုင်မှာရော တွေ့သမျှ စားခဲ့တာ ဘာမှ မဖြစ်တာလဲ အမှတ်တရပါပဲ။
ဒီလို အသီးအရွက် လတ်ဆတ်လို့လဲ အရသာကောင်းတာပေါ့
ခရီးသွား ပိုစ့်မို့ လေ့လာ သွားပါ တယ်။
သမိုင်း လေး ကို စိတ်ဝင်စားမိတယ်။
“မြန်မာပြည် တစ်ခုလုံး အင်္ဂလိပ်လက်အောက် ကျရောက်ခဲ့ပေမဲ့ ကယားပြည်နယ်ကတော့ အင်္ဂလိပ်အောက် မရောက်ခဲ့ပါဘူး ပြည်နယ်ကို နယ်မြေအလိုက် သက်ဆိုင်ရာ စော်ဘွားတွေကသာ အုပ်ချုပ်ခဲ့ကြတာပါ ၊”
အပိုင်း ၂ ကို စောင့်မျော်နေပါမည်။
အဲဒီဘက် တစ်ခါမှ မရောက်ဖူးဘူး ၊
အခု ရောက်သွားသလိုပဲ ၊
အားလည်းကျတယ်​.. ​ကျေးဇူးလည်းတင်​တယ်​.. ဒီလိုပွဲမျိုးက ကြုံရခဲတယ်ေ​လ.. ခုလို ပို့စ်​တင်​​ပေးတာ ​ကျေးဇူးတင်​ပါတယ်​..
အပိုင်း ၂ ကိုလည်း ဆက်​ပါဦး​နော်​..
ဓာတ်ပုံတွေ မြင်တော့ သတိရ သွားပြီ ကိုနို ရေ . . . အဲ့ဒီ့ ကယန်းတွေထဲမှာ ကျွန်တော် နဲ့ ထမင်းအတူတူ စားခဲ့တဲ့ ဘော်ဒါ ၂ ယောက်တောင် ပါနေတယ် ဗျို့  . . . . သူတို့ကို ဓာတ်ပုံ လာပြန်ပေးမယ် လို့ ပြောခဲ့ဖူးတယ် . . . အခုထိတော့ နောက်တစ်ခေါက် ပြန်မရောက်သေး . . . . . . . . . ။
အဲဒီနေ့က ကျောင်းမတက်လိုက်တော့ ကျနော်ကျောင်းမတက်တော့ ဂျပန်တွေ ၀င် မ၀င် မသိလိုက်ဘူး ဗျ ( နောက်တာပါ ပြန်မေးကြည့်ပြီး သိရင် ပြန်ပြောပါ့မယ်)
ပူတာအို ရောက်ဖူးတယ် မြစ်ကြီးနာ ရောက်ဖူးတယ် မြစ်ဆုံ မရောက်ဖူးဘူး
ကချင်ဒေသတွေကို လဲ သွားချင်ပါသေးတယ်
ဟန်းနီး ကို ကယားဘက် မွန်း ဘုိ့ စဉ်းစားထားနော်
ကျနော်လဲ ကိုသော်ဇင်ကို တွေ့ချင်တာ သူ့ဖုန်းလဲ မသိ
ကွန်နက်ရှင်က မကောင်းတော့ ရွာထဲလဲ ၀င်မရ ၊ ပရိုဖိုင်းမှာ ပါတဲ့ ပုံမျိုး တူသူတွေတော့ လိုက်ကြည့်မိတာပဲ
ကျနော်လဲ အဲဒီ အကြွေး တင်နေပြီ ဗျ
သူ တို့က ဓါတ်ပုံရိုက်ခံရတာ အတွေ့အကြုံကတော့ များနေပြီ ပို့စ်တွေတောင် ကောင်းကောင်း ပေးတတ်နေပြီ
ကို နို ရေ ။
တုတ်ထိုးဆိုင်တော့ သဘောကျသဗျာ ။ ဆိုင် က အကြီးကြီး ဘဲ ။
ဝက် တစ်ကောင်လုံး အပြည့် ခင်းထားသလား မှတ်ရတယ် ။
ကျနော် လွိုင်ကော် ရောက်တုန်းက ၊ အဖွဲ့လိုက် ဆိုတော့ ၊
ထမင်း ဖိတ်ကျွေးတဲ့ အိမ်တွေ လိုက်စားနေရတာနှင့် ၊
အခုလို ပွဲဈေးက ဒေသိယ စာတွေ မစားခဲ့ရဘူးဗျာ ။
ဒုတိယ ဒက်သေမှာ ပါတဲ့ အဖြူနဲ. ကယားမလေးက ရွှေမှုံရတီလေးနဲ. တူသလားလို. ခိခိ.. ချစ်ချာယေးနော်…
“ထူးထူးဆန်းဆန်းကတော့ ဘီလူးချောင်းကရတဲ့ ခရုကို ပြုတ်ထားတဲ့ ဟင်းပါ…”
ဟုတ်တာပေါ့ ကိုရင်နိုရယ်… မောင်ကျောက်ဘော်ဘော် ဘအေးက လွိုင်ကော်ကခင်ဗျ…
ဘီလူးချောင်းနံဘေး ကွက်ပျစ်လေးမှာ စေတီပုံဖင်ချွန်ခရုတွေကို…
ငရုပ်သီးစိမ်း ၄စိပ်ကွဲ၊ ပင်စိမ်းရွက်နဲ့ ဟင်းရည်ချက်သောက်တာ ဘယ်မေ့နိုင်ပါ့…
ဝက်တုတ်ထိုး ၊ ဟင်းထုပ် ၊ ခေါင်ရည်လည်းပါတာပေါ့…
စီဂျေကြီး အလွန်နှိပ်စက်တယ်… ဂလု ဂလု
အဲ့မျိုးခရုကို ကချင်တွေချက်တာက ဆန်မှုန့်နဲ့ စပါးလင်နဲ့ ငရုတ်သီးနဲ့ သောက်ဆမ်းပုံစံမျိုးချက်တာ ….ကျောက်စ်ရယ်…အလွန်မိုက်တာကလား…ချက်ကျွေးအုံးမှပဲ …
ကိုနိုရေးပြမှပဲ ကယားပြည်နယ်ရဲ့ သမိုင်းလေးသေချာသိတော့တယ်…
ခရီးသွားဆောင်းပါး ပီပီ အရသာစုံပါပေတယ်ဗျာ..ကျုပ်တော့ မရောက်ဖူးသေးဘူးဗျို့
အလယ်ကအရပ်ရှည်ရှည်နဲ့ ကယန်းနှစ်ယောက်က ပွဲတိုင်းကျော်တွေဗျ…
ကယန်းပုံ ဖေါ်ပြတိုင်း သူတို့ပုံချည့်ပဲ…ဒါကြောင့်မြင်ဖူးနေတာကြာပြီ… ကျေးကျေးပါ ကိုနိုရေ
လွိုင်ကော်ကို ဘယ်လိုသွားရမှန်းမသိတာနဲ့ မရောက်ဖြစ်လိုက်ဘူး..
အခုပုံတွေထဲမှာတော့ ဟင်းထုပ်ကို အစားချင်ဆုံးပဲ…
ကိုနိုရဲ့ လှုံ့ဆော်မှု့ကြောင့် ဒီအနားက ရှမ်းဆိုင်ကို နာရီဝက်အတွင်း ပြေးစားတော့မယ်..
ပဒေါင်ပုံတွေမြင်လိုက်ရင်.. စိတ်ထဲ… ဆင်တူတွေချည်းပဲ…
တုတ်ထိုး ကြိုက်ပုံရတယ်၊ အစားအသောက်တွေက လတ်လတ်ဆတ်ဆတ် ချက်ပြုတ်ထားတော့ ဘယ်မှာ စားစား စားကောင်းတယ်
ခေါင်ရည် လက်ကျန် လေး ရှိသေးတယ်၊သောက်ဖြစ်ရင် ကိုတိုက် ကိုယ်စား ပိုသောက်လိုက်မယ်
ဒီရက်ထဲ ခရုစုတ်သောက်တာလေး သတိရဆိုတော့ ဟင်းးးးးးးးးးးး
ကျနော်လဲ ပွဲတိုင်းကျော်တွေကို ရိုက်ဖူးတဲ့သူ ဖြစ်သွားပြီပေ့ါ ၊ သူတို့တွေ အရိုက်ခံရတာကို ရှက်ရွံ့နေတာမျိုးတော့ မရှိတော့ဘူး
ရန်ကုန် မှာ ဘယ်ဆိုင် ဟင်းထုပ် အကောင်းဆုံး လဲ ဗျ
သူတို့ ပြောတာတော့ ဒီပစ္စည်း ဒီလူပဲ လုပ်တာချင်း အတူတူ အဲဒီ ဒေသက ဟင်းထုပ်က ပိုကောင်းလို့ ဆိုဘဲ
အသက် ၆၀ ကျော် ဆိုတာ ငယ်သေးတာပဲ မအိုသေးပါဘူး ဗျ
ကျုပ်ကို ဘာလို့ မခေါ်တာတုန်းးး
ပြည်နယ်ထဲ ရှမ်းပြည်ကလွဲ ဘယ်မှ မရောက်ဖူးဘူးအေ။
ကယား ကို ဘာကြိုက်တုံးဆို ရိုးရာ အဝတ်အစားကိုကြိုက်တယ်။ ဟီးဟီးးးး
၈ တန်းလောက်က အဲလို ဒီဇိုင်းလုပ်လိုက်သေးးး
နောက်မှ ရှေးကားထဲက မင်းသမီး တွေ ခိုးပြေးမယ်ဆို ထရိုင်ဆာ အနွေးထည်ကို ခြုံတဲ့ စတိုင်နဲ့ တူနေလို့။ ငိငိငိ။
သူတို့ အစားအသောက် signatureဟင်း က ဘာတုန်းတော့။
ခေါ်ရင် တကယ် လိုက်မှာလား
ခုမှပဲ ဘယ် ၂ ရက်စာ မန့် အကြွေးတွေ ဆပ်လို့ပြီး။
ကာခတောင် အလှူရှင် ရှိနိုင်တယ်
ထောက်ကြံ့ဘက် ဆိုတော့ သိပ်လဲ မဝေးဘူး
၇ ရက် စခန်း လား ၁၀ ရက် စခန်းလား
တရားစခန်း ကို ပြောတာကိုး။။။
အတော် သဒါ တယ်မှတ်တာ။
သများကို ခုလို စေတနာထားတဲ့ အကျိုးးးးအဖြစ်
မဟုတ်တာလုပ်ထားတာမှန်သမျှ အကုန်ပေါ်ပြီး မဟေသီက ဗိုက်ခေါက်လိမ်ဆွဲပါစေတော်။
ကျုပ် နောက် (၂)လလောက်အတွင်း လွိုင်ကော်ကိုသွားပါ့မယ်…
အော်… လွမ်းစရာ ကယားမလေးတော့မရှိ…
ကယားပြည်နယ်ဆိုပြီးခေါ်တာ မမှန်ဘူးဆိုဘဲ ( ကျပ်ဒါ )
တခါက အသိတယောက်က အဲဒီ ကယားဝက်အူချောင်းမဲမဲကြီး ယူလာကျွေးတာ မစားရဲလို့ မစားခဲ့ရဘူး။
ကျုပ်တို့ တွေ့ဆုံပွဲကို မလာပဲ လွိုင်ကော်မှာ ကယန်းမလေးတွေ သွားချိတ်နေတာ မကျေနပ်ပါဘူးအေ။
တခြား ဟာတော့ မသိ အဲဒီ အခေါ်အဝေါ် ပိုင်းတော့ သူကြီး နဲ့ တစ်သဘောတည်းပဲ ဗျ
ကယားပြည်နယ်ဆိုတော့ အဲဒီမှာ နေတဲ့ ရှမ်း တို့ ကယော တို့ ဗမာ တို့ အတွက် တမျိုးကြီး ဖြစ်နေတယ်၊ နေရာ ၁၄ ခု မှာ အုပ်ချုပ်တဲ့ သူ က အဲဒီနေရာကို ချစ်သော အဲဒီ နေရာကို တိုးတက်အောင် လုပ်နိုင်သော အဲဒီ နေရာကလူတွေ လက်ခံနိုင်သော ဘယ်သူ အုပ်ချုပ် အုပ်ချုပ် ဆိုတာမျိုးဖြစ်သင့်တာပဲ (ဗမာဖြစ်ရမယ် ရှမ်းဖြစ်ရမယ် ကချင်ဖြစ်ရမယ် ဆိုတာမျိုး မဖြစ်သင့်ဘူး)
ကယား ၀က်အူချောင်း ကလဲ စားဘူး မှ ကြိုက်တာ
အရသာ ဘယ်လောက်ကောင်းကောင်း အရောင် အဆင်း လေး ကြည့်စားတဲ့သူ ဆို
တို့ မှာတောင် မဟုတ်ဘူး
လူ က ကယားမလေးတွေ ဘေး ရောက်နေပေမဲ့
စိတ်ကတော့ ရွာ့ တွေ့ဆုံပွဲမှာပါ